ရွှေ့ပြောင်း ဒုက္ခသည် ကယ်ဆယ်ရေး သင်္ဘောများ ပြန်ခေါ်ရန် နယ်သာလန် ကို အီတလီ တောင်းဆို - Yangon Media Group
ရွှေ့ပြောင်း ဒုက္ခသည် ကယ်ဆယ်ရေး သင်္ဘောများ ပြန်ခေါ်ရန် နယ်သာလန် ကို အီတလီ တောင်းဆို
ရောမ၊ ဇွန် ၁၇
ပရဟိတအဖွဲ့အစည်းများက ဦးစီးဆောင်ရွက်နေသည့် ရွှေ့ ပြောင်းဒုက္ခသည်ကယ်ဆယ်ရေး သင်္ဘောနှစ်စင်းကို ပြန်ခေါ်ရန် နယ်သာလန်အစိုးရကို အီတလီအစိုးရက တောင်းဆိုလိုက်ကြောင်း၊ ဇွန် ၁၇ ရက် ရိုက်တာသတင်းကဆိုသည်။ ထိုပရဟိတအဖွဲ့တစ်ခုက အီတလီပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးကို ဖက်ဆစ်ဝါဒီဟု ခေါ်ဆိုခဲ့ပြီးနောက်တွင် ထိုသို့တောင်းဆိုလိုက်ခြင်း ဖြစ်သည်။
ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဆာလ်ဗီနီက မြေထဲပင်လယ်တွင် လှုပ်ရှား နေသည့် ရွှေ့ပြောင်းဒုက္ခသည် ကယ်ဆယ်ရေးသင်္ဘောများကို အီတလီဆိပ်ကမ်းများတွင် ဆိုက်ကပ်ခွင့်တားမြစ်လိုက်သည်။ ”အီတလီဟာ တရားမဝင်ရွှေ့ ပြောင်းအခြေချမှုတွေကို လက်မခံတော့ဘူးဆိုတာ သူတို့သိထားသင့်တယ်။ သူတို့အနေနဲ့ တခြား ဆိပ်ကမ်းတွေမှာဆိုက်ကပ်ကြရ လိမ့်မယ်။ အီတလီဆိပ်ကမ်းတွေကတော့ လက်ခံတော့မှာမဟုတ်ဘူး”ဟု လက်ယာစွန်း League ပါတီ၏ ခေါင်းဆောင်လည်းဖြစ် သော ဆာလ်ဗီနီက ပြောသည်။
အာဖရိကနှင့်အရှေ့အလယ်ပိုင်းဒေသမှ စစ်ဘေးရှောင်ဒုက္ခသည်များသည် မြေထဲပင်လယ်ကို လှေ၊ သင်္ဘောများဖြင့် ကျော်ဖြတ်ကာ ဂရိနှင့်အီတလီဆိပ်ကမ်းများ ရောက်ရှိခဲ့ကြသည်။ ထိုဒုက္ခသည်များကို အခြားဥရောပနိုင်ငံများက လက်မခံလိုကြသဖြင့် အီတလီသည် ခေါင်းရှုပ်ခံကာ ဒုက္ခသည်များကို ယာယီထိန်းသိမ်းပေးနေရသည်။ ထို့ကြောင့် ရွေးကောက်ပွဲတွင် ရွှေ့ပြောင်းဒုက္ခသည်များကို မလိုလားသော အမျိုးသားရေးဝါဒီပါတီများ အနိုင်ရခဲ့သည်။ အမျိုးသားရေးဝါဒီညွန့်ပေါင်းအစိုးရသည် သက်တမ်းသီတင်းနှစ်ပတ်သာ ရှိထားသော်လည်း ရွှေ့ပြောင်းဒုက္ခသည်အရေးကို အလျင်အမြန် ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်လာခဲ့သည်။
ကိုယ်ဝန် ဖျက်ချမှုကို နာဇီတို့၏ လုပ်ရပ်များနှင့် ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီး ခိုင်းနှိုင်းပြောဆို
နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် (၇၃)နှစ်မြောက် မွေးနေ့အကြို ဂုဏ်ပြုစုပေါင်း သွေးလှူပွဲမျ??
နာတာရှည် နောက်ကျော နာကျင်မှု ၁ဝ မိနစ်ကုသရုံဖြင့် ပျောက်ကင်း
အဲဗာတန်အသင်းနှင့် ပတ်သက်သော သတင်းများကို ဘန်လေ အသင်းနည်းပြ ရှောင်ဒိုက်ချီ ငြင်းဆို
၂ဝ၁၅ ခုနှစ်က ခန့်ခဲ့သည့် နည်းပြသရုပ်ပြများ ရာထူးတိုး အပြောင်းအရွှေ့ နှင့်ပတ်သက်၍ ကြန့်ကြာမ?
မြဝတီမြို့တွင် လောင်းကစား ဂိမ်းရုံများကို ဆက်တိုက် ဖမ်းဆီးရာ ဂိမ်းစက် ပစ္စည်းများနှင့်အတူ ??